Kolontsaina sy ARTSIKA tamin'izany fotoana izany - taonjato faha-15 - ny Tany Masin'i Vietnam Studies
HAFY sy ny ARTSIKA tamin'izany fotoana izany
Prof TAN, HA VAN
Miaraka amin'ny fahamarinan-toerana sosialy amin'ny faha-15th taonjato, nifehy ny kolontsaina sy ny kanto. The Lam Son1 ny fikomiana sy ny fanafahana ny firenena aorian'izay dia nanentana ny fanoratana literatiora ao Nguyen Trai's2 Binh Ngo Dai Cao (Fanambarana momba ny faharavan'ny Ming). Nanaraka izany Ly Ter Tan's3 Xuong Giang Phu (Ode mankany amin'ny Ony Xuong - ny sehatry ny ady lehibe amin'ny Ming); Nguyen Mong Tuan's4 Lam Son Giai Khi Phu (Ode mankany amin'ny Rano Salutary an'ny Mount Lam Son) ary Nghia Ky Phu (Ode ho an'ny mpampihatra lalàna), ary koa ny asa maro hafa. Malagasy Le Thanh Tong5 ny tenany dia naka ilay lohahevitra iray ihany Phu Lam Son.
Le Thanh Tong5, King-cum-poet, dia nandray anjara betsaka tamin'ny fampandrosoana ara-kolontsaina. Nanorina Tao Dan6, klàn-tsoratra. Ireo mpikambana 28 dia nitovy amin'ny kintana 28 tany an-danitra, ary nisaina izy ireo izay namoronana famoriam-boky maro. Nosoratra tamin'ny script Vietnamese antsoina hoe script Nom7, miorina amin'ny ideolojia sinoa. Ny script dia nampiasaina tamin'ny asa soratra lehibe maro samihafa misy ny Quoc Am Thi Tap (Famoronana tononkalo amin'ny fiteny nasionaly) by Nguyen Trai 7 ary Hong Duc Quoc Am Thi Tap, kininina tononkira mihoatra ny telonjato.
Ny Confucianisme dia nisy herim-po lehibe, na tamin'ny literatiora sy ny zava-kanto. Nandritra ny taonjato maro, vitsy ny tempoly bodista sy stupa no naorina, fa ny ezaka dia napetraka tao Thang Long8 ho fanomezam-boninahitra an'i Confucius, dia namboarina tamin'ny ambaratonga lehibe kokoa ary nohavazana ny tsangantsangana mitovy amin'ny faritra maro hafa ao amin'ny firenena.
Ireo mpanjakan'ny Le dynasty9 samy vonona avokoa ny hanorina trano vaovao any an-drenivohitra. Ireo lapa ny Kinh Thien10, Afaka Chinh11 ary Van Tho12 nandidy Le Loi13 tamin'ny 1428. Niaraka tamin'i Hoi Anh izy ireo taty aoriana14, Afaka Dure15, Tucmg Quang16, Kim Loan17, Thuy Ngoc18 sy tranobe feno haingo.
Any amin'ny faritra atsimon'ny tanàna dia natsangana ny sehatra lehibe. Anisan’ireny i Nam Giao19 sy Xa Tac20, izay nanaovana ny fombafomba ara-pivavahana natao matetika mba hanomezam-boninahitra ny lanitra, tany. Ny ankamaroan'ny vokatra 15th Ny sary sokitra taonjato taonjato izay mijanona ankehitriny dia sarivongana vita amin'ny vato ny olona sy ny biby. Izy ireo amin'ny ankapobeny dia kely, somary voarangotra ary tsy manana kalitao sy fiainana tsara tarehy, izay mampiavaka ny sary sokitra eo ambanin'ny dynastie Ly sy ny Tran. Ny sanganasan'ny sculptural sasany, toy ny dian-tongotra vita amin'ny vato vita amin'ny amboadia, dia naka endrika iray lehibe raha vantany vao nanangana azy ireo izy. Le dragona, sahala amin'ireo eo amin'ny Kinh Thien (Efitra fitsarana) ao Ha cotadel Ha Noi, dia samy hafa tanteraka amin'ireo voasokitra ao ambany Ly ary ny Tran19. Manana maso misoloky izy ireo, tandroka mikambana ary valan-dasy maranitra, ary apetraka amin'ny piraika mampatahotra kokoa, miaraka amin'ny iray foronina izay mitazona ny volombava. Amin'ny ankapobeny, Le dragona20 jereo fombafomba ary noho izany, masiaka.
Ireo seramika, etsy an-daniny, dia niroborobo teo ambanin'ny Le dynasty. Ny tena zava-dehibe dia ny fampidirana ny glaze manga izay anaovana endrika maro loko - rahona, dragona, phoenixes, chrysanthemums, shrimps, foza, lotus ary voninkazo voasarimakirana - nasarina tamin'ny alokaloka samy hafa teo amin'ny fotsy fotsy. Ny kapoka feno fahasahiana tamin'ny kirihitrala dia nanome kalitao kanto avo kokoa an'ny valiny.
The 15,h tamin'ny taonjato iray dia nanamarika fizarana maranitra amin'ny fampisehoana zava-kanto. Tao amin'ny fitsarana, dia fehezin'ny fitsipika henjana ary nanjary fombafomba sy stereotypika.
Ny fitaomana ny Ming21 dia tsapa mafy tao amin'ny fitsarana. Mandritra izany fotoana izany, fialamboly malaza - Tuong (opera mahazatra mahazatra), Cheo (opera malaza) ary ny mozikan'ny olona dia nanohy namabo ny olon-tsotra.
Nanao fitsarana ny fitsarana ilay fitsarana mba hialana amin'ny fialamboly malaza. Malagasy Le Thai Tong5 tamin'ny 1437 voarara chco avy amin'ny Thai Mieu22, ny tempoly natokana ho an'ny kolotsain'ny razambeny. Malagasy Le Nhan Tong23, rehefa nanao fitsidihana an'i Lam Kinh izy tamin'ny taona 1448, dia nisy ny tovolahy sy tovovavy iray nanao dihy antsoina hoe Rt Ren24 izay nalain'izy ireo tahaka ny fakana voninkazo sy fanenomana azy ho fehiloha. Nandritra ny ampahan'ny dihy dia niampita ny tongony indraindray ny tarika ary noho izany dia voampanga ho nanao vetaveta ireo mpanompo ny mpanjaka.
Na dia eo aza ny fitsipika rehetra sy ny fitsipika, ny karazana fialamboly malaza dia tsy naharitra.
1 Lam Son … Manavao…
◊ Loharano: Ny fanamboarana an'i Vietnam. Ha Van Tan. thegioipublishers.vn, 2018. Sary; wikimapia.org.
◊ Ny fitanisana rehetra sy ny sary sepia nasongadin'i BAN TU THU - www.hitoriam.com.
(Visited 1,620 fotoana, 3 fitsidihana amin'izao fotoana izao)
← Ny FIVORIANA FIVORIANA amin'ny taonjato faha-15
Ireo mpamaky teny eran'izao tontolo izao dia miditra amin'ny HOLYLANDVIETNAMSTUDIES.com →
NY ASAN'NY FIVORIANA ETHNIC 54 any VIETNAM - Fizarana 2
Comments Off momba ny Vondrom-piarahamonina GROUPS ETHNIKA 54 ao VIETNAM - Fizarana 2
Fampidirana ho an'i SAIGON - NY ZANAK'ANDRIAMANITRA FARANY EAST
Comments Off momba ny Fampidirana an'i SAIGON - NY PEARL OF THE FAR EAST
Marina ve izany fa PANORAMA an'ny FIVORIANA VIETNAMESE tamin'ny fiandohan'ity taonjato ity?
Comments Off amin'ny marina ve izany dia PANORAMA an'ny FIVORIANA VIETNAMESE tamin'ny fiandohan'ity taonjato ity?
Fampidirana Nataon'ny Profesora amin'ny tantara PHAN HUY LE - Filohan'ny Fikambanana Ara-tantara ao Vietnam - Fizarana 2
Comments Off momba ny FANAMBARANA nataon'ny profesora momba ny tantara PHAN HUY LE - Filohan'ny Fikambanana manan-tantara any Vietnam - Fizarana 2
GOUJIAN: sabatra Sinoa fahiny izay manohitra ny fotoana (7,963)
Fiteny VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny… (5,352)
FITENY VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy vahiny - Fampidirana - Fizarana 1
Comments Off momba ny LANGUAGE VIETNAMESE ho an'ny Vietnamese sy ny vahiny - Fampidirana - Andininy 1
Ny Voahangy any Atsinanana - NY FIVORIANA MANOKANA (Fizarana 1)
Comments Off eo amin'ny Voahangy Farany Atsinanana - NY FOTOTRA FOSSILIZED (Fizarana 1)
Ny vondrona MUONG ahitana vondrona foko enina 54 any Vietnam
Comments Off momba ny vondrona MUONG misy vondrona Ethnomaly miisa 54 any Vietnam
Ny vondron'olona BA NA Vondron'olona 54 foko any Vietnam
Comments Off amin'ny vondron'olona BA NA Vondron'olona 54 ao Vietnam
Ny Poeta TAN DA dia nandany fotoana tamin'ny TET niaraka tamin'ny piastre sisa tsy manam-paharoa
Comments Off amin'ny Drafitra Poet TAN DA handany amin'ny fotoana TET miaraka amina piastre tsy manam-paharoa
Fitsidihana anio: 306
Andro farany 7 nitsidika: 2,281
Total visits: 420,532